'Murume anofanira kuvimbika uye kuvimbika, sezvinoita ngoro kana ngoro inoda mavhiri.'
- ne Confucius
Shanghai Feipeng Automotive Technology Co., Ltd unyanzvi mu ndokugadzira vhiri magadzirirwo gadzira. Feipeng anomirira unhu uye nouchangamire uye anokuisai munhu Chinese ethnical pefiyumu: Niyue. Feipeng anopawo munhu zvichienderana vhiri magadzirirwo basa uye OEM basa.
Senhengo CAW (China Aluminum Wheel Quality Association), Feipeng rinonyatsotevedzera unhu mitemo. The engineering unhu chikwata Feipeng ane makore anopfuura 40 Zvakaitika vhiri gadzira indasitiri, uye nguva dzose anoita kuti kupa mukuru kuita uye vaitungamirira magadzirirwo ndokugadzira vhiri kwamuri. Chikwata chedu nyanzvi uye midziyo yakanaka nechokwadi rwendo rwenyu vakachengeteka.
Niyue ndokugadzira mavhiri vachiita zvetsika Chinese umhizha kuti kuti Made in China vanozvikudza zvakare!
Independent muchiso , bvumidzwa design, Category dzakatevedzana , hapana plagiarism, hapana neizvi mapurani. Hwakajeka magadzirirwo kwedu simba uye CAE ongororo kugona achitirega munhu zvichienderana kugadzira mukati 3 days
iRacing chitoro mumuchina nyanzvi mukugadzira mwero kwazvo customized mavhiri. Lead nguva mazuva 30
Rinonyatsotevedzera chitarisiko uye unhu kudzora muitiro. Vamwe nzira dzekuziva kuchakunda US uye Japanese mumaindasitiri mwero zvakadai, vanomhanya-kure uye nesimba mwero.
Detialed unhu garandi gwara kudzivirira kodzero vatengi '. All Feipeng zvigadzirwa vane hwose uhwu garandi uye mwedzi 18 yokunamisa garandi.